zuru oke Yoga,Iru kacha Health, iburu n'uche & Ime mmụọ Enlightenment | Bodaily.com
zuru oke Yoga,Iru kacha Health, iburu n'uche & Ime mmụọ Enlightenment
12 Mar zuru oke Yoga,Iru kacha Health, iburu n'uche & Ime mmụọ Enlightenment
Posted at 11:53h na X-Files Season 1, X-Files Season 2, YOGA	by	bodaily 0 Comments
Maka uninitiated, mbido a yoga Tee nwere ike eche n'ezie akarị. Ọ bụghị nanị na-na udi aha uda amaghị (hatha, vinyasa, Iyengar, Forrest), Otú ọ dị na inwe aha na-mgbe ụfọdụ ẹkenam ke a pụrụ iche asụsụ (tadasana, savasana, uttanasana), na a na e ịgụ egwu ugboro ugboro na-akpọrọ nchegbu.
Ọ na-ewe ikike idi na-eme ka itu ukwu ma sonyere gị ọkaibe, Otú ọ dị bụrụ na ị na-atụgharị uche oké banyere inyefe a ute, nke a bụ ihe ọ bụ ihe dị oké mkpa mara ina malitere.
Ọma ịbụ Uru
Yoga kemgbe gburugburu ruo ọtụtụ narị afọ, na-abụghị na Western uche-set, mbụk, yoga bụghị niile banyere inwe.
na eziokwu, yoga si aru mgwa bụ a buturu ọhụrụ mgbakwunye na omenala itinye. “Yoga na-banyere ume,” kwuru Jenay Rose, a 500-hour Ụghalaahia Yoga Ozizi, na-akara ahụ ike nchịkwa, na-elekọta mmadụ media influencer. “The toughest ọkara na-egosi elu, otú ọ bụrụ na ị pụrụ nanị ịghọta akụkụ okuku ume, na ị na-arụ ọrụ n'ebe.”
Na mfe ịmụta akụkụ okuku ume na ike idozi dividends na mmekọrita gị nke ọma ịbụ. One 2014 Nyochaa e biri ebi na Medical Science Nyochaa isi Analysis chọpụtara otu, 25-nkeji eduzi protocol nke ọzọ oghere imi yoga akụkụ okuku ume na nke ukwu-ebelata ọbara nchegbu na akụkụ okuku ume na ego na hypertensive na ezi ọrụ afọ ofufo.
Otu n'ime ndị a meditative akụkụ okuku ume, mgbe weere aru ngagharị, ga-enyere aka nchegbu, obi nkoropụ, na anxiousness, welie iwe, ma melite elu àgwà nke na-ehi ụra. Iji bụghị tụọ, na poses, ma ọ bụ asanas, jiri aru yoga omume nwere ike melite mgbanwe, welie kwụsie ike na nchikota, na na ọnọdụ ụfọdụ, mma ume.
Yoga dị ka a zuru ezu bụ nnọọ na-enye aka eme nke ahụ bụ ala, inweta maka ọtụtụ ná ndị mmadụ.
Otu nke mfe ụzọ ka a kụziere yoga bụ site n'ime ya, Otú ọ dị bụrụ na ị ụjọ banyere ịga a Atiya, adịghị ise ghara ime a bit nke achọta si tupu ị na-aga. Gaa na akaụntụ ọzọ.
Ọ bụ ezigbo aro ka a n'ezie maka ihe nile nke iche iche iche iche nke yoga tupu ị na-aga a na udi. Dị ka ihe atụ, hatha yoga ọmụmụ bụ a mma maka Newbies dị ka a N'ihi nke na ha na-iji nwayọọ na-akpali akpali. Vinyasa, Ashtanga, na ume yoga ọmụmụ nwere ike sie ike, ịdabere na n'ókè nke ntụziaka, ezie Vinyasa ọmụmụ na-haziri maka na Newbies. Iyengar nwere a dị ike ndibiat ziri ezi itinye n'ọnọdụ, na mgbe ụfọdụ na-eji props aka ụmụ akwụkwọ mahadum ezi obiọma ha.
Kpọnwụọ yoga eme ka eji poses nke pụrụ ịdị mfe n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ n'otu n'otu, Otú ọ dị ka a n'ihi nke n'ụzọ kpọnwụọ gburugburu ebe ọmụmụ eme (ọtụtụ nka praịm 104-degrees), nwere ike ọ gaghị abụ ihe amamihe ma ọ bụ na-eju afọ n'ihi na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ mahadum. Dị ka ihe atụ, ime na ụmụ agbọghọ ma ọ bụ ndị a na a mata ọgwụ ọnọdụ nwere ike ọ gaghị na-achọkwa ime ihe nlereanya a. Kundalini ọmụmụ emekarị ekwukwa extra ekpere, ịgụ egwu ugboro ugboro, na okpukpe mmiri, nke nwere ike n'ezie agbakasị bụrụ na ị amachaghị ụdị yoga.
Your kasị ukwuu maa bụ iji lee anya na udi schedules maka nwa afọ yoga nka ịhụ ihe di iche iche nke yoga ha na-enye, na-eme ụfọdụ mmezi igwu ala ịchọpụta nke ọmụmụ bụ ikekwe ihe ndị magburu onwe egwuregwu n'ihi na ị.
Kpamkpam dị iche iche di iche iche Kọwaa
Ị nwere ike ịchọ ka gị yoga ụdị ma ọ bụ chọpụta ihe gị yoga persona bụ ịhụ nke nke ọzọ ụdị bụ onye kasị ukwuu n'ihi na ị. E nwere ọtụtụ nke họrọ si, Otú ọ dị ekwela ka nke ahụ menye gị ụjọ. Anwa a mbido-enyi na enyi na klas mbụ karịa branching si (ma ọ bụrụ na-ịchọrọ ị).
Hatha bụ a n'ezie isi oge na-agụnye ọ bụla nke gụrụ ụdị yoga. Na ruo ụbọchị yoga lingo, hatha abịawo gosiri a ngwa ngwa-paced na siri n'ụzọ nke-arụ ọrụ n'ebe. Hatha ọmụmụ bụ mgbe ụfọdụ ebe dị mma na-amalite a yoga itinye dị ka a N'ihi nke na ha na-enye bụ mmalite na isi yoga virus na a ala-key ọnọdụ.
dị ka hatha, vinyasa bụ isi isi oge eji kọwaa ọtụtụ iche iche iche iche nke ọmụmụ. Vinyasa nēche na-a extra ike nlereanya nke yoga incorporating usoro nke poses maara dị ka anyanwụ salutations, ebe ọ bụla ngagharị na-adịkwa ka ume.
A vinyasa klas na-emekarị-amalite na dị nnọọ ọtụtụ nke anyanwụ salutations ka ikpo elu physique maka mmezi ufiop ndinyanade mbịne okokụre na imecha nke sophistication. Vinyasa nwekwara ike mara dị ka ije, banyere ndị nọgidere na-efegharị si otu postcho na ụdi.
dabere na 1997 site John enyi, Anusara agwakọta a dị ike mesiri ike na aru itinye n'ọnọdụ na a nchekwube nkà ihe ọmụma dabeere na-akasị na a nghọta n'ime intrinsic ịdị mma nile Nigeria. Ọmụmụ bụ ejikari ìhè-hearted na inweta, emekarị na a ndibiat akwara obi oghere.
Ọ dị mwute na, Enyi-adịghị metụtara Anusara dị ka a N'ihi ya nke ya onwe indiscretions. Anusara bụ now a nkụzi na-edu yoga ngalaba na enyi ka malitere a ohuru yoga nlereanya maara dị ka Sridaiva (-ahụ n'okpuru).
Ashtanga bụ a ngwa-ngwa-paced, ufiop, etoola nlereanya nke yoga dabeere site Pattabhi Jois n'ime 1960. A set usoro nke poses a rụrụ, oge niile na yiri iji. Nke a itinye pụrụ ime nnọọ ka aru-achọ n'ihi na ofu ngagharị site na otu inwe ụdi na mesiri ike na ụbọchị ọ bụla itinye.
Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ụzọ yoga ụdị nakweere ọtụtụ ọdịda anyanwụ ụmụ akwụkwọ kọleji na-ama nnọọ na-akwanyere ùgwù n'ime mmalite nke yoga mbụ 30 afọ.
Baptiste Energy Vinyasa
Baron Baptiste bụ mmetụta yoga innovator-amụrụ ọtụtụ ọzọ ụdị yoga, karat, na ntụgharị uche tupu emepe emepe ọnụ na ya onwe ya pụrụ iche yoga Usoro, Baptiste Energy Vinyasa.
Nlereanya ya na-predicated on 5 ogidi: vinyasa, ujjayi pranayama, ịhụnanya, uddiyana bandha, na Drishti. ọmụmụ, na-rụrụ na a kpụ ọkụ n'ọnụ ụlọ, ndị na-emekarị siri ike na sweaty.
Bikram / ọkụkụ Yoga
Kpọnwụọ yoga e sụrụ ụzọ site Bikram Choudhury, onye aha tụgharịa otu yoga ọmụmụ kụziri a ụlọ na-ewe iwe ka 95 ka 104 etoju. The ịhụnanya mmemmem echikwapụ nke uko muscular anụ ahụ na profuse sweating, nke a na-ewere ihicha. The Bikram Usoro a set usoro nke 26 poses, Otú ọ dị bụghị niile kpọnwụọ ọmụmụ ka ojiji nke a usoro.
CorePower Yoga bụ a usoro nke kpọnwụọ yoga nka dabere na Denver na 2002. Nlereanya na-ngwa ngwa na-amụba niile site america. Ịgụ na mgbe nile ntụziaka na upscale mgbatị-dị ka ọnọdụ. A otu na-atọ ụtọ mgbe ọ bụla nke ha nka mba.
Dabere ukwuu n'ime na ndị ozizi nke yoga ighota B.Ok.S Iyengar, nlereanya a nke ide bụ ihe niile banyere nēbute physique n'ime ya kasị mma itinye n'ọnọdụ, na-emekarị tinye n'ọrụ props yiri yoga blanket, nkanka, na straps na-enyere ụmụ akwụkwọ mahadum ịmụta ziri ezi ụdị.
Iyengar omume ejikari mesie ejide poses n'elu ogologo durations nke oge dị ka a dochie anya nke na-ebufe ngwa ngwa site na otu inwe ụdi (dị ka a ije klas). Iyengar kemgbe oké mkpa n'ime uto nke na-adịbeghị anya yoga asana.
Nke a nlereanya nke yoga pụta n'ime n'afo 1980 site na otu New York obodo ukwu nke kacha mara yoga nka. Jivamukti founders David Life na Sharon Gannon agwagbuwo na rigor nke Ashtanga yoga ọnụ na ịgụ egwu ugboro ugboro, na-atụgharị uche, na ozizi okpukpe. Ha na-na na gụrụ akwụkwọ ọtụtụ ọmụmụ onye na-na na ẹkenam a nlereanya nke yoga na nka na mmega, predominantly n'ime U.S. na Europe.
Jivamukti ọmụmụ bụ n'anụ ufiop na mgbe ụfọdụ nabatara ihe inspirational isiokwu họọrọ ọzụzụ.
Headquartered na Santa Monica, California, Forrest Yoga bụ tactic kụziiri Ana Forrest. The arụmọrụ nke ike asana usoro a pụtara iji ike na ọcha physique na ẹkedori pent-elu mmetụta na mgbu ume ọgwụgwọ nke aru na obi mgbawa. Ịgụ na onye na-ufiop mmega onye mesiri ike na afo ike, inversions, na miri akụkụ okuku ume.
Kripalu bụ onye ọ bụla a yoga nlereanya na a ichighaazu obi Stockbridge, Massachusetts. Kripalu bụ a yoga itinye na a ọmịiko usoro na mesiri ike na-atụgharị uche, aru ọgwụgwọ, na okpukpe mgbanwe na-eju n'ime ụbọchị ọ bụla ndụ. Ya Ọzọkwa na-elekwasị anya na-achọ ihu na-ebufe na gị onye tempo, eme ka ọ na ihe ndị magburu onwe ide maka folks na nanị agagharị dị ka a N'ihi ya nke afọ, ibu, ọrịa, ma ọ bụ nsogbu.
The mesiri ike na Kundalini bụ na ume n'akụkụ aru ngagharị, na ebumnuche nke na-atọhapụ ike n'ime ọnụ physique na ekwe ya awụgharị elu site n'ụzọ nke niile nke chakras.
All asana omume ka ojiji nke ịchịkwa ume, Otú ọ dị na Kundalini na ngagharị ndị na-esi nke ume (Ọzọkwa mara dị ka prana, na pụtara na ike) na kpee bụ mkpa. Kundalini arụsi na-Ọzọkwa mara dị ka kriyas.
Integral bụ a siri hatha nlereanya nke yoga dabeere na-akasị na echiche na isi nke Sri swami Satchidananda, bụ ndị chọrọ ka na-ewetara-eso ụzọ pointers na otú otu onye nwere ike welie ndụ ha. Na ihe na-agbalị na ikpokọta echiche, physique, na spirit, ọmụmụ Ọzọkwa ịmakụ pranayama, ịgụ egwu ugboro ugboro, na ntụgharị uche.
Noksh / Nodo
Moksha kpọnwụọ yoga dabeere na Canada na 2004. na 2013, ha gbanwetụrụ aha ha mmekọ U.S. nka na Modo Yoga. Onye ọ bụla na ụdị na-dabeere na-akasị na a usoro nke 45 virus okokụre na a kpụ ọkụ n'ọnụ ụlọ. The nka na-atụ anya na-arapara environmentally maara iwu na-ọcha chọrọ na azụlite a ụzọ nke otu ya ma ọ bụ ya ụmụ akwụkwọ mahadum.
N'ime ufọt ufọt 1990s, a ọnụ ọgụgụ nke pụrụ iche ọmụmụ ndị e zụrụ nke ọma na ot yoga anọwo na-ele anya maka ụzọ ka ije yoga inweta extra folks. Ndị sochirinụ ọmụmụ nwetara ebe a iji mata site nche anwụ oge nke ike yoga.
Energy yoga na mbụ na-enwe mmetụta na-omimi nke Ashtanga Otú ọ dị kwere maka mgbanwe n'ime sequencing nke poses na uche nke na-enye ọzụzụ. Modern ike yoga ọmụmụ bụ isi ike vinyasa ije.
Ume ọhụrụ yoga eme ka eji props aka physique n'ihi na ọ na-eme ka n'ime poses n'elu N'ezie nke a ọnụ ọgụgụ nke nkeji. The echiche bụ ịnọgide na-ọ bụla inwe ogologo zuru ezu na-agba ume n'ezinụlọ ndinyanade mbịne. Nọ ọdụ n'ihu bends, nwayọọ supine backbends, na twists na-ihe atụ nke ụdị poses nwere ike na-ahaziri na-enye ume ọhụrụ na mgbakwunye na nke props ka blanket na-eme.
The isi Sivananda Yoga Vedanta Heart dabeere na 1959 site swami Vishnu-devananda, a na-eso ụzọ swami Sivananda. E nwere n'ezie nso 80 ebe n'ụwa nile, ọnụ na a ọnụ ọgụgụ nke ashrams. Sivananda yoga na-predicated on 5 echiche, ọnụ na omume nke asana, pranayama, na ntụgharị uche. The mastery nke iri na abụọ rigorously họọrọ poses bụ na isi nke ide.
Mgbe ahapụ Anusara Yoga (-ahụ n'elu) na 2012, John enyi malitere Sridaiva na Colorado studio proprietor Desi Springer. Nlereanya a na-ewebata a ohuru itinye n'ọnọdụ usoro, nke ha aha bowspring. Ọ bụ pụtara kpam kpam dị iche iche si dị iche iche iche iche nke yoga na na ikpere na-kpebisiri na nza nke poses na pelvis bụ oge niile Inye ego mmiri oyi n'ihu na-ahụ spinal akụkụ. Na-akwado echiche kwuru na ha na-achọpụta a ọhụrụ ọkọnọ nke ike na ume site na nke a itinye n'ọnọdụ.
Viniyoga bụ oge tinye n'ọrụ site T.Ok.V. Desikachar kọwaa ụkpụrụ na nna ya, asọpụrụ ọzụzụ T. Krishnamacharya, mepụtara mbubreyo ná ndụ ya. Ọ na-dabeere na-akasị na ihe ndị mmadụ na usoro iji ọ bụla nwa akwụkwọ, na-eme ka a itinye na dabara ya ma ọ bụ ya pụrụ iche na ogbo nke ndụ na ala nke ọma ịbụ. Ọbụna otu ọmụmụ, Viniyoga na-ahaziri ona ọ bụla onye ahụ kpọmkwem chọrọ.
Yin Yoga na-a Tee mepụtara ọzụzụ Paul Grilley iji gbatịa physique na connective anụ ahụ, budata gafee nkwonkwo. N'ebumnobi ime na, akpan akpan poses-ẹkenịmde n'elu N'ezie nke a ọnụ ọgụgụ nke nkeji. Grilley kwesŽrŽ a emetụta hazie physique ka nwere ikike na-anọdụ ogologo ekpere oge na-akpa àgwà ka a counterpoint ka ije-edebere ike Yang ụdị yoga.